Digniinta ama ka xiridda xaqa lacag ku qaadashada barnaamijka
Haddii aadan tusaale ahaan si firfircoon shaqo u raadin ama aad iska daysid in aad dhaqdhaqaaqaga warbixin ka soo gudbisid, waxaa lagu siin karaa digniin. Haddii ay taasi dhowr jeer dhacdo waxaa hal ama dhawr maalin lagaa xiri karaa xaqa aad Qasnadda Ceymiska lacagta uga qaadatid. Marka ay ku soo gaarto warqad laguugula soo xiriiray oo ku aaddan digniin ama ka xirid, waxaad inta aan la gaarin go’aan kama dambeys ah, fursad u haysataa in aad soo gudbisid xog dhameystir ah. Markaas isticmaal foomka aad ka heleysid linkiga boggan xagga hoose uga yaal.
Maamulka Xafiiska shaqada wuxuu kormeerid ku samayn doonaa, haddii aad buuxin karto shuruudaha gunnada barnaamij, kaddib wuxuu go`aan ka gaari karaa in laga joojiyo qaadashada gunnada, haddii nidaamyada shaqo raadsashada aadan tixgelinin ama kaalin ka geysato xaaladda shaqo la`aanta.
Haddii shirkadaha adeegyada aan ka iibsanno ay taageero ku siiyaan, waxaa waajib ku ah in ay na wargeliyaan haddii nidaamyada shaqo raadsashada aadan tixgelinin ama kaalin ka geysato xaaladda shaqo la`aanta.
Haddii hab xun u dhaqanto ama nidaamyada shaqo raadsashada aadan tixgelin
Tixgelinta nidaamyada shaqo raadsashada awgeed waa inaad tixgeliso qodobada aan ku heshiinay.
Tani waxay kugu hagi doontaa digniinta ama joojinta qaadashada gunnada barnaamij xiriir la leh
Ka qaybgasho kulamada ama nala soo xiriirto anaga ama shirkadaha adeegyada aan ka iibsanno.
Ka qaybgasho talaabo ka qaadista ama dhaqdhaqaaqyada
Waa inaad raadsato booska shaqada ama tababarka aan kugu guubaabinay (anvisat) inaad raadsato
shaqo oo aad arjay u qoratay, waxay noqon karaan kuwa la xayeeysiiyay ama kuwa Xafiiska Shaqada kugu gubabiyay inaad arjay u qorato (anvisat), ama ku siiyay naseexada booska shaqo ee bannaan. Waxaad wargelinta xiisaynta ama cv-gaaga shirkadda shaqo-bixiyeha ah.
Haddii nidaamyada shaqo raadsashada aadan tixgelin waxaa dhici doonto in
Tani waxay keeni kartaa digniin ama ka joojinta gunnada lacagta ee laga helo Qasnadda Caymiska.
Marka aad heshid digniinta ama ka xiridda xaqa lacag ku qaadashada barnaamijka
Marka aad heshid digniinta ama ka xiridda xaqa lacag qaadashada waxaad naga heleysaa wax loogu yeero “warqadda la xiriirid” (kommuniceringsbrev). Inta aanan gaarin go’aan kama dambeys ah waxaad fursad u haysataa in aad keentid xog dhameystir ah.
Foomka loogu tala galay in lagu soo gudbiyo xog dhameystir ah (af-Iswiidhish oo keliya)
Marka uu ku soo gaaryo go’aan kama dabeys ah oo aadan ku qancin
Haddii aadan ku qanacsaneyn go’aanka kama dambeysta ah waxaad dalban kartaa in aan dib u eegno. Haddii ay sidaas tahay, buuxi foomka ”Dalabka ku aaddan dib u eegista go’aanka digniinta ama ganaaxa” (Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion) oo noo soo dir.
Dalbo in dib u eegis go’aanka lagu sameeyo (af-Iswiidhish oo keliya)